ပူတင်က အနောက်နိုင်ငံများ၏ ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် “ စီးပွားရေးလျှပ်တစ်ပြတ်တိုက်စစ်ဆင်မှု”သည် ကျရှုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား - Xinhua News Agency
ပူတင်က အနောက်နိုင်ငံများ၏ ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် “ စီးပွားရေးလျှပ်တစ်ပြတ်တိုက်စစ်ဆင်မှု”သည် ကျရှုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် အွန်လိုင်းမှတဆင့်ပြုလုပ်သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အစည်းအဝေးပွဲတွင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မော်စကို ၊ ဧပြီ ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အနောက်နိုင်ငံများ၏ ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် “ စီးပွားရေးလျှပ်တစ်ပြတ်တိုက်စစ်ဆင်မှု” မဟာဗျူဟာသည် ကျရှုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်က ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ နှင့်ပတ်သက်သည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ရုရှားနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက် အဓိကအနုတ်လက္ခဏာအကြောင်းတရာဖြစ်ပေါ်စေရန် မကြာသေးခင်နှစ်များက အနောက်နိုင်ငံများ၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် “ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံထဲမှာ ဘဏ္ဍာရေး နဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ လျင်လျင်မြန်မြန် အားလျော့ချိနဲ့သွားအောင် ၊ ဈေးကွက်ထဲမှာ အထိတ်အလန့်ဖြစ်သွားအောင် ၊ ဘဏ်စနစ်တွေ ပြိုလဲပျက်စီးသွားအောင် နဲ့ အရောင်းဆိုင်တွေမှာ စားသောက်ကုန်စည်တွေ ပြတ်လပ်သွားအောင် ” ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပူတင်က ဆိုသည်။
ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် ယင်း “ မှန်းဆ၍ မရနိုင်သော ဖိအားများ” ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ရူဘယ်ငွေကြေးတန်ဖိုးမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမလဝက်တွင်ရှိခဲ့သော ငွေဈေးနှုန်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် ငွေပေးချေမှု လက်ကျန်စာရင်း၏ လက်ရှိအကောင့်ထဲပိုငွေပြမှုသည် ယခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ ဘီလီယံကျော်အထိ စံချိန်တင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပူတင်က ဧပြီ ၈ ရက်အထိ ပြီးခဲ့သော တစ်လခွဲကျော်ကာလအတွင်း ရုရှားနိုင်ငံ၏ တစ်နှစ်တာ စားသုံးသူဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုသည် ၉.၄ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည် ၁၇.၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် အမေရိကန် နိုင်ငံ နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများကိုပါ ပြန်လည်ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ယင်းနိုင်ငံများ၌ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု နှင့် အလုပ်လက်မဲ့များဖြစ်ပေါ်ခြင်း ၊ စီးပွားရေးမောင်းနှင်အားများ ချိနဲ့သွားခြင်း ၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းလျော့ကျခြင်း နှင့် စုငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ပူတင်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
West’s “economic blitzkrieg” against Russia fails: Putin
MOSCOW, April 18 (Xinhua) — Western countries’ “economic blitzkrieg” strategy against Russia has failed, President Vladimir Putin said Monday atagovernment meeting on economic issues.
The main negative factor for the Russian economy in recent years has been Western sanctions, which were aimed at “quickly undermining the financial and economic situation in our country, provoking panic in the markets, destroying the banking system, and causingalarge-scale shortage of goods in stores,” Putin said.
Russia has withstood this “unprecedented pressure” as the ruble’s value has returned to the level of the first half of February and the surplus in the current account of the balance of payments reachedarecord high of more than 58 billion U.S. dollars in the first quarter of this year, he noted.
Meanwhile, Putin admitted that over the past month andahalf, consumer prices in Russia have increased by 9.4 percent and inflation surged to 17.5 percent in annual terms as of April 8.
However, the sanctions in turn have hurt the United States and European countries by driving up inflation and unemployment, weakening economic dynamics, reducing living standards, and devaluating savings, Putin added.
Photo- Russian President Vladimir Putin holdsameeting on economic issues via video link on April 18, 2022. (Kremlin photo)
ရုရှားနိုင်ငံက ယခုနှစ်ကုန်တွင် နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး Sarmat ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်စနစ်ကို တပ်ဖြန့်ချထားမည် ဟု ပူတင်ဆို
BRICS စီးပွားရေးဖိုရမ်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုမျှော်လင့်ချက်များအပေါ် ယုံကြည်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေ